Iphupha Ngokuzinikela Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ngengqiqo yobuKristu, igama "ukuzinikela" lithetha ukubuyela ngokomoya, okuhamba noxinzelelo lwangaphakathi. Ukuzinikela kubhiyozelwa ikakhulu kwiCawe yamaKatolika kwaye kubonakala ngeendlela ezahlukeneyo ngexesha lecawa, njengokuzila ukutya okanye ukuthandaza ngeRosari. Ngenyanga kaCanzibe kuqhutywa iminyhadala ebizwa ngokuba nguCanzibe, enikezelwe kuMama uMariya. Kananjalo ekupheleni konyaka kuhlala kukho i- umthandazo wokuphela konyaka kulo nyaka uphelileyo ubonakalisiwe.
Ngaphakathi ekutolikeni kwamaphupha, uphawu "ukuzinikela" yenye yemifanekiso yamaphupha enkolo kwaye inxulumene ngokusondeleyo nezinye iisimboli zamaphupha enkolo, njengomthandazo okanye intsikelelo. Ke ngoko, kunokuba luncedo ukusebenzisa ezi phawu zamaphupha kuhlalutyo olwandisiweyo lwamaphupha. Nangona kunjalo, oku kuxhomekeke kwiimeko ezihamba nomqondiso wephupha "umthandazo."
1 Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokwenkcazo ngokubanzi yamaphupha, umthandazo njengophawu lwephupha ubukhulu becala walatha kuwo uphuhliso oluhle kwiinkampani ezithile. Izicwangciso zamaphupha ziya kuphumelela el mundo yomlindo. Ukuzimasa ukuzinikela ephupheni kunokukhomba kwikamva eliqaqambileyo. Lowo uleleyo angalindela ikamva lakhe ngovuyo kuba liya kutyhileka ngokweminqweno yakhe.
Umntu othabatha inxaxheba ekuzinikeleni ephupheni lakhe unokunqwenela isikhokelo somoya ekuvukeni ubomi. A ukucinga ngaphakathi Yiba luncedo, kuba iingxaki zangaphandle zihlala zisombululwa ngokukhawuleza. Ngomthandazo wokuzinikela ephupheni, umnqweno womphuphi woncedo unokuzibonakalisa. Ngokombono wakhe, ukwimeko yokuphelelwa lithemba kwilizwe lokwenyani apho anokulinda khona kuphela ukungenelela kukaThixo.
Kodwa ngamanye amaxesha lo mfanekiso wephupha ungabonisa iimvakalelo zokuziva unetyala. Umntu oleleyo uyasokola noku kwihlabathi lokuvuka kwaye ulangazelela ukuxolelwa. Ke ngoko, ngephupha lakhe, kufanele ukuba kucace kuye ukuba lolu xolelo lunokunikwa kuphela.
Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolikwa kwengqondo
Kwinqanaba leengqondo lokuchazwa kwephupha, "ukuzinikela" kubonakala kwisimboli yephupha. Biza uncedo umphefumlo. Umphuphi uzifumana ekwimeko yobomi apho engenakho ukuziqhelanisa; unokufuna inkxaso yangaphandle. Ke ngoko, kuya kufuneka ufune uncedo olungagungqiyo okanye ujolise kulwalamano lwakho lwenkolo. Kuba oku kunokubangela isisombululo kubukho bakho.
Ukuba umntu umamele ngokuhlonela omnye umntu ephupheni lakhe, unqwenela kakhulu ukuya nzulu. Ngoku kufuneka ushiye inyathelo elingaphezulu kwaye ujonge kwizinto ezixabisekileyo emphefumlweni wakho. Umfanekiso wephupha wesivakalisi unokusetyenziswa njenge isilumkiso yokungabikho zingqondweni kunokuqondwa. Oku kubiza iphupha ukuba lizinzise kwaye lizibonise ngokwalo kunye namaxabiso aphezulu.
Uphawu lwephupha «ukuzinikela» - ukutolika kokomoya
Ngaphakathi ekutolikeni kwamaphupha okomoya, uphawu "ukuzinikela" luphawu lokulangazelela komphuphi ngenkxaso yakhe. amandla amakhulu, kuba uyayidinga kwimeko yakho yangoku yobomi.